Global Voices teny Malagasy » Kambodza: Mihamanakaiky ny BarCamp Phnom Penh 2010 · Global Voices teny Malagasy » Print
Kambodza: Mihamanakaiky ny BarCamp Phnom Penh 2010
Voadika ny 05 Septambra 2010 11:54 GMT 1	 · Mpanoratra Sopheap Chak Nandika miora
Sokajy: Azia Atsinanana, Kambodza, Hafanàm-po nomerika, Teknolojia
Ny BarCamp Phnom Penh 2010, izay ho tontosaina ny 25 ka hatramin'ny 26 Septambra, dia manantena handray 1.000 zo ho eo amin'ireo mpandàla mavitrika ny IT (Teknolojian'ny Informatika). Ao amin'ny Barcamp official press release , dia mampiseho ny tanjona amin'ity hetsika ity ny iray amin'ireo mpikarakara ity “fihaonana tsy manana endrika kaonferansa*” ity:
“Ny hevitra dia ny hitondrana ireo olona rehetra mitovy hevitra mba ho vavolombelon'ny hatsaràn'ny BarCamp. Izao no fotoana sady mampalalaka ny vahoaka hizara no hizaràna ihany koa. Tsy afaka miteny ny fivoaranao aorian'ny fandraisanao anjara amina hetsika tahaka izao ianao nefa afaka miteny aho fa tena manaraka tokoa ny fepetrany ianao, hahita fientanentanana amin'ity hetsika ity ianao. Ary tsotra ny fepetra : ny fandraisana anjara.”
Tohizan'i Samsokrith amin'ny fanazavana ny firafitry ny BarCamp izany:
Ny fiasan'ny BarCamp dia tsotra. Raha manana lohahevitra ianao, ary te-hampahafantatra na hiady hevitra mikasika izany, avoahy ao amin'ny fàfana fanolorana ery amin'ny mpandrindra izany lohahevitra izany ary avy eo homena efitrano sy fotoana hanaovana ny fampahafantaranao na ny fiadian-kevitra miaraka amin'ireo mpandray anjara ianao.”
Ity BarCamp Phnom Penh 2010 ity no hetsika fahatelon'ny BarCamp tany Kambodia hatramin'ny 2008. Tamin'ireo taon-dasa, mpitoraka blaogy maro, vondrona tsy mitady tombontsoa sy ireo fianakaviamben'ny mpandraharaha no nanome fanohanana goavana sy fandraisana anjara mavitrika ka nahatonga ireo BarCamps teo aloha ho tonga lafatra. Vutha Morn , iray amin'ireo mpankafia fihaonana mikasika ny IT, miantso ireo mpamaky ny blaoginy mba tsy ho taraiky amina fihaonana manintona tahaka izao:
“Tsy nisy nodinganiko ireo BarCamp Phnom Penh roa teo aloha tamin'ny 2008 sy 2009. Nahazo fahalalàna bebe kokoa mikasika ny IT aho. Amin'ity hetsika fahatelo ity, dia mbola hirotsaka ao anatin'izany aho. Ary ianao mba ahoana? Aza taraiky an'ity hetsika manokana ity.”
Ao anatin'ity BarCamp's press release  ity ihany, mbola manazava ireo fanantenana goavana entin'ny hetsika amin'ity taona ity i Samrith amin'ny fanantenana hahasarika “mpandray anjara maro ka hanampy azy ireo hahita bebe kokoa ny hatsaran'ny foto-kevitra ijoroan'ny BarCamp, sady handray anjara amina adihevitra mavitrika mikasika ny fivoaran'ny teknolojia ao amin'ny firenena na faritra iray lalovantsika, izay ny teknolojia ao anatin'izany dia anisan'ny ampahany mitombo miaraka amin'ny fiainantsika andavanandro.”
Ny fanambarana tahaka izany dia mampiseho ny fahafahana miditra ny aterineto any Kambodia. Na dia voafetra ho 9.8% aza ny tahanm-pidirana amin'ny aterineto tany Kambodia tamin'ny 2009, dia antenaina fa hihatsara miaraka amin'ny fitaran'ireo orinasa maro mpanome tolotra aterineto izany. Efa misy ihany koa ireo fitaovana vaovao tahaka ny fampiasana ireo finday na ireo modems-n'ny aterineto azo entina mandehandeha izay manome fahafahana miditra malalaka amin'ny aterineto an'ireo mpampiasa aterineto na aiza na aiza amin'ny fampiasàna karatra voaloa sanda mialoha ( prepaid cards).
Fanampin'izay, ohatra tsara ho an'ny hetsika  ifampizaràn'ireo olontsotra ny vinavinan'izy ireo mikasika ireo foto-dresaka mahatalanjona anatina tontolo tsy misy teritery ihany koa ny Barcamp. Izany ny fandinihan'i Preetam Rai , mpamoaka lahatsoratra taloha tao amin'ny Global Voices Online ho an'ny faritra Asia Atsimo sady iray amin'ireo mpitoraka blaogy malaza any Asia. Ito ny fijerin'i Preetam mikasika ny fiantraikan'ny lasitra BarCamp:
“Miadana sy am-pitandremana, maka toerana maneranana an'i Azia ny fiovan'ny fianarana. Hery iray ao ambadik'ity fiovana ity ny hetsika fantatra amin'ny anarana hoe BarCamp. Misokatra ny BarCamp, malalaka sy tsy mametraka fandaharam-potoana ho an'ireo mpiteny. Ireo Barcamps mindrana na misambotra efitrano fivoriana, dia mampiasa tambajotra sosialy ho famphafantarana ny olon-drehetra, ary miankina amin'ireo mpandray anjara ny hahatonga izany hetsika izany ho fahombiazana.”
Midera ny hamaroan'ireo mpandray anjara tamin'ny BarCamp voalohany tany Myanmar  izay natrehina olona nihoatra ny 2,000 nanerana ny firenena ihany koa izy. Mampandroso ny fifandeferana eo amin'ny kolontsaina samihafa ny Barcamp ary mitanisa ny niainany ireo BarCamp Kambodiana i Preetam:
“Tamin'ny BarCamp vao haingana indrindra tany Kombodia, ireo mpandray anjara Khmer sy Thai dia ninia nanadino ny resaka fifandirana noho ny resaka sisintany sy tempoly mba hilofosana bebe kokoa tamin'ireo fomba hampivoarana ny teknolojia tsy mitady tombon-tsoa manokana.
Na hahatratra ny tanjony na tsia ny hetsiky ny BarCamp tamin'ity taona ity any Kambodia amin'ny fampivoarana ny fianarana sy ny kolontsain'ny fifandeferana amin'ny alalan'ny fivoaran'ny fanapariaham-baovao, iangaviana ianao hiaraka hanisa mihemotra anio ka handray anjara amin'ny hetsika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/09/05/8855/
 Barcamp official press release: http://barcampphnompenh.org/articles/official-press-release-barcamp-phnom-penh-3-2010/
 Vutha Morn: http://www.vuthasurf.com
 Preetam Rai: http://preetam.net/
 BarCamp voalohany tany Myanmar: https://globalvoicesonline.org/2010/02/01/myanmars-first-barcamp-in-yangon/